Tsy misy fotoana voafaritra mazava
Mitandrema, miambena, ka mivavaha; fa tsy fantatreo izay hihavian’ny fotona. Mar. 13:33
Enga anie ka avelan’Andriamanitra ho tsapa eo amin’ity fiangonana lehibe ity ny heriny manova. Enga anie ka hitoetra eo amin’ny vahoakany ny herin’Andriamanitra. Toe-panahy araka an’Andriamanitra isan’andro no ilaintsika. Mila mandinika ny soratra Masina isan’andro isika, mila mivavaka amin-kafanam-po mba hanamboaran’Andriamanitra ny tsirairay, amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina, ho mendrika ny hiasa ao amin’ny tanim-boalobony. Tsy misy olona voaomana ny hampianatra sy hampahatanjaka ny fiangonana raha tsy efa nandray ny Fanahy Masina. Tsy misy mpitandrina voaomana ny hiasa amim-pahendrena ho amin’ny famonjem-panahy raha tsy efa vonton’ny Fanahy Masina, sy vokisan’i Kristy, ary mankahala mafy ny fahotana (...)
Tsy manana fotoana voarafitra mazava holazaina aho ny amin’ny fotoana hirotsahan’ny Fanahy Masina – ny amin’ny fotoana izay hidinan’ilay anjely mahery avy any an-danitra sy hikambanany amin’ilay anjely fahatelo eo amin’ny famaranana ny asa ho an’ity izao tontolo izao ity. Ny hafatro dia izao: ny hany fiarovana ho antsika dia ny ho vonona hatrany ho amin’ny famelombelomana avy any an-danitra, hihazona hatrany ny fanaovan-jirontsika ho madio sy mirehitra. Nasain’i Kristy hiambina isika; “fa amin’izay ora tsy ampoizinareo no hihavian’ny Zanak’olona” Mat. 24:44. “Miambena, ka mivavaha” no baiko nomen’ny Mpanavotra antsika. Isan’andro isan’andro isika dia tokony hikatsaka ny fanazavan’ny Fanahin’Andriamanitra mba hahazoany manao ny asany eo amin’ny saina sy ny toetra. Endrey, fotoana manao ahoana no nolanilaniam-poana tamin’ny fifantohana tamin-javatra maivan-danja. Mibebaha ianareo ary aoka hiova fo mba hamonoana ny fahotanareo, dia mba ho avy amin'ny fanatrehan’ny Tompo.
Miantso anareo izahay ankehitriny mba hanolo-tena ho amin’ny asa fanompoana an’Andriamanitra. Efa ela loatra no nanomezanareo ny herinareo ho amin’ny asan’i Satana sy nanompoanareo ny sitrapony. Miantso anareo Andriamanitra mba hibanjina ny voninahitry ny toetrany, ka mba hovana araka ny endriny ianareo amin’ny alalan’izany fibanjinana izany. (...) Tonga teto i Jesôsy mba haneho amin’izao tontolo izao ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fahatsarany. - RH, 29 Martsa 1892.